Global Voices teny Malagasy » Lesona Momba Ny Fiteny: Mbola Miady Hevitra Momba Ny Fiteny i Kazakhstan (Fiteny Kazakh sa Rosiana) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Marsa 2018 4:26 GMT 1	 · Mpanoratra Dina Baidildayeva Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kazakhstan, Fitantanam-pitondrana, Fiteny, Mediam-bahoaka, Politika
Mpitondra ao Kazakh, Nursultan Nazarbayev ao amin'ny Kremlin. Sary avy amin'ny governemanta Rosiana.
Tamin'ny faran'ny volana lasa teo, nahatonga fihetseham-po ny filoha mpanao didy jadona, Nursultan Nazarbayev, izay efa zokinjokiny ao Kazakhstan rehefa nandidy  ny manampahefana mba hiresaka amin'ny fiteny Kazakh, fa tsy amin'ny fiteny ofisialy hafa, Rosiana ao amin'ny firenena.
Mbola adihevitra be ao amin'ny firenena Azia Afovoany ny antony mahatonga ny baiko, sy ny mety ho fiantraikany
Kazakh no fiteny ofisialin'i Kazakhstan hatramin'ny 1989, fony izy mbola Repoblika Sovietika. Na dia ampahaefatry ny taonjato taorian'ny fahaleovantena aza, mbola manjaka amin'ny fampahalalam-baovao, ny governemanta nasionaly sy ny sehatry ny fihariana ny fiteny Rosiana, lova navelan'ny ‘fampidirana ny teny Rosiana’ tamin'ny vanim-potoana imperialy sy kômônista.
Ankoatra izay, hita fa mahasoa ho an'ny firindran'ny foko ao amin'ny firenena samihafa ny fanjakazakan'ny fiteny Rosiana hatrany.
Mandrafitra ny roa ampahatelo mahery amin'ireo mponina 18 tapitrisa ao amin'ny repoblika ny Kazakh, ary fahadimy ny Rosiana. Matetika zatra miresaka amin'ny fiteny Rosiana fa tsy Kazakh ireo vondrona hafa, tahaka ny Okrainiana, Oigoro, Tatars sy Koreana, ary mirona amin'ny fiteny Rosiana ihany koa ireo Kazakh maro monina ao amin'ireo tanàna roa lehibe indrindra ao Almaty sy Astana.
Na i Nazarbayev tenany aza, izay miteny Kazakh tsara, dia hita fa tia miteny Rosiana.
Famoahana farany amin'ny alfabeta Kazakh. Talohan'ny taona lasa, natolotra ny alfabeta amin'ny fiteny ofisialy ao amin'ny firenena, tahaka ny Rosiana, amin'ny soratra Sirilika.
Ny fanjakazakan'ny fiteny Rosiana ao Kazakhstan dia tombontsoa ho an'i Rosia ihany koa, izay mihevitra an'i Kazakhstan ho mpiara-dia lehibe sy anisan'ny “tontolo Rosiana”  lazain'ny filoham-pirenena Rosiana Vladimir Putin manokana.
Noho ireo antony ireo, nahagaga ny maro ny baiko tampoka hanaovana ny fivorian'ny governemanta amin'ny fiteny Kazakh “ihany” tamin'ny 26 Febroary.
Nitatitra  ny Reuters ny ampitson'io fa saika ny manampahefana rehetra no nampiasa ny fiteny nandritra ny fivorian'ny filankevitra, ka nahafaly ireo mpisera media sosialy miteny Kazakh.
Tamin'ny valinteny mahazatra momba ny vaovao, nanoratra tao amin'ny Facebook i Bakyt Sultan fa “resaka fotoana [nandrasana]” ny baiko tahaka ity. Tamin'ny fiteny Kazakh miaraka tamin'ny teny Rosiana vitsy ny lahatsoratr'i Sultan.
Resaka Fotoana [nandrasana] izany!!! Mampalahelo fa lasa fahazarana ho antsika ny miteny Rosiana noho ny vahoaka vitsivitsy izay tsy miteny Kazakh. Raha miteny Kazakh isika, tokony hianatra ireo izay tsy miteny izany.
Marzhan Usenbay, hafa mpiteny Kazakh, nanoratra fotsiny hoe : “Tsara! Tsara! Vaovao mahafinaritra.”
Fanilihana an'i Rosia sa “fandrebirebena” hafa?
Tsy ho faly tokoa i Moskoa. Mahita ny baiko hampiroboroboana ny fampiasana ny teny Kazakh amin'ny ambaratonga avo indrindra ho andrana hampihenana ny ambaindain'ilay goavan'ny faritra misy an'i Kazakhstan mankany avaratra.
Voatsikaritra hatrany ny fihetsika toy izany eo amin'i Kazakhstan taorian'ny taona vitsy nikorontana izay nanomboka tamin'ny krizin'i Okraina tamin'ny taona 2014.
Hatramin'izany fotoana izany, nampiasa fomba maro hanamafisana ny fahaleovan-tenany manoloana an'i Moskoa i Kazakhstan. Tamin'ny taona 2015, nankalaza  ny faha-550 taona ny maha-fanjakana tamin'ny fomba lehibe izy rehefa toa nametraka fisalasalana momba ny tantaran'ny firenena talohan'ny Sovietika i Putin.
Nazarbayev miaraka amin'ny Praiminisitra Rosiana Dmitri Medvedev sy ny filoha Belarosiana Aleksandr Lukashenka. Ny teny Rosiana no teny manjaka ao Belarosy na dia misy aza ny teny Belarosiana. Sarin'ny governemanta Rosiana.
Ny hafa kosa mahita izany ho fanodikodinana saim-bahoaka manoloana ny fihisaran'ny fitomboan'ny toe-karena sy ny kolikoly goavana. Ireo karazana fihetseham-po ireo dia naneho taratra  ireo valinteny amin'ny fanapahan-kevitry ny governemanta tamin'ny herintaona mba hanova ny abidia ampiasaina amin'ny Kazakh ho Latina fa tsy Sirilika intsony.
Mpisera Facebook mitondra ny solonanarana Natsad Napsa nanipika  ilay baiko ho “fandrebirebena.”
Fandrebirebena fotsiny izany! Raha marina, dia tokony hanaisotra ny teny Rosiana ao amin'ny Lalàmpanorenana izy ireo. Raha tsy manao izany izy ireo, dia fanodinkodinan-tsaina fotsiny izany!!
Tsy ny parlemanta sy ny governemanta ihany fa ny Kazakhstan manontolo, anisan'izany ny rafitra rehetra, ny haino aman-jery, ny [fanabeazana] manomboka amin'ny sekolin'ny ankizy kely hatramin'ny Oniversite Nazarbayev sy ny filoha tenany ary ny fitantanany no tokony hiresaka amin'ny teny Kazakh. Fanampin'izany, tsy maintsy soratana amin'ny teny Kazakh ny taratasy ofisialy. Raha tsy izany no zava-misy, dia mbola tranga iray hafa fandrebirebena ny olona amin'ny fanambaràna izany.
Ao anatiny ny tongotra iray fa ny ilany any ivelany
Raha tena matotra i Kazakhstan amin'ny fialàna amin'ny teny Rosiana ho amin'ny Kazakh, dia tena ho sarotra ho an'ireo manampahefana ambony izany.
Amin'izao fotoana izao, mazoto mizara horonantsary tamin'ny fivorian'ny Parlemanta vao haingana ireo mpampiasa media sosialy, izay nahitàna solombavambahoaka iray mametraka fanontaniana amin'ny lehiben'ny banky foibe Daniar Akishev, foko Kazakh izay ny fiteny Rosiana no fiteny voalohany.
Mamaly amin'ny fiteny Kazakh i Akishev mba hiezaka hanatanteraka ny baikon'i Nazarbayev, saingy tsy nety nahazo resaka. Niteraka fihomehezana teo amin'ireo mpiteny Kazakh tao amin'ny media sosialy ny valinteniny.
Na izany aza, raha niely ny lahatsary, tahaka izany ihany koa ny lahatsoratra Facebook iray  navoakan'ireo mpiserasera manohana an'i Akishev, ary mampahatsiahy ny fahasahiranan'izy ireo manokana mianatra miteny ny fiteny ofisialy.
Na izany na tsy izany, tsy tokony halahelo i Akishev, izay nampanantena hanatsara sy hifehy ny teny Kazakh raha vao voatendry ho filohan'ny banky foibe nihoatra ny roa taona lasa izay.
Andro vitsy lasa izay, somary nanalefaka  ny fangatahana amin'ny manampahefana mba hiteny Kazakh “ihany” tamin'ny fotoam-pivoriana ny governemanta.
Raha niresaka tamin'ny fivoriana tamin'ny 1 Martsa tao amin'ny antenimieran-doholona, nanamarika  ny senatora Dariga Nazarbayeva, izay vavimatoan'ny filoha sy mety ho mpandimby azy fa mbola “tsy nisy nanaisotra” ny teny Rosiana, ary mbola hampiasaina ho fiteny ofisialy ny teny.
Niresaka tamin'ny fiteny Rosiana izy nandritra ny fivoriana.
Hafatra nisavoritaka tokoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/06/115920/
 “tontolo Rosiana”: https://www.theguardian.com/world/2014/sep/01/kazakhstan-russian-neighbour-putin-chilly-nationalist-rhetoric
 nanoratra tao amin'ny Facebook : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1307457196022394&id=100002743780136
 nanoratra fotsiny hoe: https://www.facebook.com/marzhan.usenbay/posts/717305021798921
 naneho taratra: https://globalvoices.org/2017/04/18/kazakhstans-great-alphabetical-distraction/
 lahatsoratra Facebook iray: https://www.facebook.com/sabirovkz/posts/10215043533139411
 somary nanalefaka: https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-language/kazakhstan-says-russian-not-banned-from-government-after-all-idUSKCN1GD5HP